Moa ve ny volana febroary ho volana isian'ny AirPods an'ny taranaka faharoa? | Avy amin'ny mac aho
Moa ve ny volana febroary ho volana isian'ny AirPods an'ny taranaka faharoa?
Ilay mpiara-miasa aminay Jordi Giménez dia efa nilaza taminay tamin'ity maraina ity raha tao anatin'ny herinandro isika rehefa hamidy ilay mpandahateny HomePod nandrasana hatry ny ela i Apple. Raha nanaraka akaiky ny vaovao ianao dia ho fantatrao fa efa navoaka fa singa iray tapitrisa mahery no ho any Apple avy amin'ny fivorian'ny fivoriambe ary, farany, efa nankatoavin'ny FCC ny fivarotana azy.
Izany rehetra izany dia manondro fa, tokoa, ny zavatra rehetra dia tsy maintsy "eo an-tampon'ny lanezy." Na izany aza, ny hevitro manetry tena dia hoe mbola hiandry herinandro iray farafahakeliny isika. mihevitra aho fa ny hetsiky ny Apple rehetra dia hatao amin'ny herinandro voalohany na roa febroary.
Araka ny efa fantatrao, Apple dia manaraka akaiky izay rehetra misy ifandraisany amin'ny orinasa DJI an'ny drôna sy ny fakantsary miorina. Ho fantatrao fa amidy ao amin'ny Apple Store ireo vokatra ireo miresaka momba ny vokatra Apple amin'ny doka fotsiny i DJI. Izany rehetra izany dia mampiseho fifandraisana akaiky eo amin'ireo orinasa roa izay nanehoako hevitra tamin'ny fotoana hafa, nino fa miankina amin'ny iray hafa ny iray. Tsarovy fa ny DJI dia namoaka ny Mavic Pro Alpine Drone fotsy nataon'i Apple.
Rahampitso 23 Janoary dia misy hetsika iray andrasana eran'izao tontolo izao any New York hanolotra zavatra tena lehibe avy amin'ny DJI noho izany tsy heverinay fa handeha i Apple manitsaka ny famelabelarana ny vokatr'izy ireo ary izany, fantatsika fa rehefa mandray ny dingana ny avy amin'ny Cupertino dia mahavita manao ampihimamba ny haino aman-jery rehetra.
Etsy ankilany, te-hilaza izany koa aho eo akaikin'ny HomePod azoko antoka fa ho tonga ny AirPods faharoa, headphone izay efa hita tamin'ny fampisehoana ny iPhone X ary mbola tsy misy fantatra momba azy ireo. Hanana tranga iray izy ireo izay hiampangana amin'ny induction toy ny iPhones vaovao sy ny fanatsarana ny famokarana feo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Moa ve ny volana febroary ho volana isian'ny AirPods an'ny taranaka faharoa?
Apple dia mamporisika ny fanabeazana zazavavy ao amin'ny Malala Foundation
Xiaomi dia miziriziry mijery toa ny MacBook an'ny Apple miaraka amin'ny Mi Notebook Air-ny